PET Polyester Fiber Acoustic Panel ၏ အားသာချက်များ - သတင်း - Suzhou Soundbetter Architectural Materials Co., Ltd.
PET Polyester Fiber Acoustic Panel ၏ အားသာချက်များ
၏အားသာချက်များPET Polyester ဖိုက်ဘာ ကော့စတစ် ပန်နယ်
Polyester ဖိုင်ဘာ အသံစုပ်ယူနိုင်သော panel သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးလက္ခဏာများသည် E1 အဆင့်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏မီးဘေးလုံခြုံရေးအဆင့်မှာ B1 အဆင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အလတ်စားနှင့် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများအတွက် ကောင်းမွန်သော အသံလျှပ်ကာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
2. သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မော်ဒယ်များကို အလိုအလျောက် အလွယ်တကူ ဖြတ်တောက်နိုင်ပါသည်။
ပိုလီမာဖိုက်ဘာထည်၏ အသံစုပ်ယူမှုအကန့်များ၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မော်ဒယ်များသည် အခန်းအတွင်း အသံ insulation နှင့် အလှဆင်ရန်အတွက် အထူးသင့်လျော်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အရောင်ကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်အတွက် အခန်းအရွယ်အစားကိုလည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
3. အလှဆင်ဒီဇိုင်း၏ အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ခိုင်မာသည်။
ထို့အပြင်၊ polyester sound-absorbing board သည်အလှဆင်ဒီဇိုင်း၏အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အသံစုပ်ယူခြင်းဘုတ်ပြားထုတ်လုပ်သူအများအပြားသည် ထုတ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း အလှဆင်ဒီဇိုင်း၏ အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိစေရန်အတွက် အသံစုပ်ယူနိုင်သောဘုတ်ပြားကို အရောင်များစွာဖြင့် စွန်းထင်းစေခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ မှာယူနိုင်ပါသည်။ စနစ်။
လက်ရာမြောက်သော အသံစုပ်ယူနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်အပြင်၊ polyester fiber ထည်မှ အသံစုပ်ယူသည့် panel သည် မီးမကူးနိုင်သော၊ ရေစိုခံခြင်း၊ အပူလျှပ်ကာနှင့် အပူလျှပ်ကာများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသည်။ တာရှည်ခံသည်။
အော်ဂဲနစ်ဖိုက်ဘာ အသံစုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ polyester fiber ထည်မှ အသံစုပ်ယူသည့် အကန့်များသည် ပါးလွှာလွန်းသောကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သိုလှောင်မှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ကာလကုန်ကျစရိတ်များကို ဖြုန်းတီးပါသည်။
6. တည်ဆောက်မှုသည် တိုတိုရှင်းရှင်းဖြစ်သည်။
Polyester ဖိုက်ဘာထည် အသံစုပ်ယူနိုင်သော အကန့်များသည် ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းစဉ် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ နောက်ခံဓားများကို ဖွင့်ဖြတ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို လက်သည်းသေနတ်ဖြင့် ချက်ချင်း ခိုင်မြဲစွာ တွဲထားနိုင်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများသည် ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး ဓာတုဖိုက်ဘာဖိုက်ဘာများကို ဆောက်လုပ်ရေးစနစ် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း လွယ်ကူစွာ မဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေ။
လွန်ခဲ့သော:Acoustic Panels ကိုရွေးချယ်သည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်
နောက်တစ်ခု:Polyester Fiber Acoustic Panel ၏ Flame Retardant Effect ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။